Ku dheji suunka kursiga ama cajaladda duubka: Aaladaha Ammaanka ee Diyaaradda Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ku dheji suunka kursiga ama cajaladda duubka: Aaladaha Ammaanka ee Diyaaradda Cusub
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dupe Duct: Aaladda Cusub ee Ammaanka Diyaaradda
Inta badan, rakaabka aan duuliyaha lahayn ee duulimaadka waxaa hoos u dhiga shaqaalihii diyaaradda oo cajalad duub ah. Oo maxaa diidaya? Way xoog badan tahay, waa ammaan, waa sababta hooyada casriga ah ee caqliga lihi carruurteeda ugu tidhi: “Dupe cajalad. Ha ka tagin guriga la'aanteed. ”
Cajalad duub ah ayaa la duubay iyada oo loo sii jeedo ammaanka duulimaadka diyaaradda halkaas oo ay aad muhiim ugu tahay in rakaabka la xakameeyo.
Kaliya bishii la soo dhaafay oo keliya, ugu yaraan dhowr xaaladood ayaa dammaanad qaaday adeegsiga cajalad duub si loo sugo rakaabka kantaroolka u ah kuraastooda.
Waxaa laga yaabaa inay jirto tilmaam ku saabsan qarsoodiga adeegsiga cajaladda duubka ee u muuqda diyaarad rakaab.
American Airlines ayaa toddobaadkan sheegtay Talaadadii in qiyaastii saacad ka dib markii ay ka duushay diyaarad ka duushay Maui kuna socotay Los Angeles, diyaaradda ay ahayd in loo weeciyo Honolulu kadib markii wiil 13 jir ah uu carqaladeeyay.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in wiilka uu isku dayay inuu daaqad ka agdhigay kursigiisa sidoo kale wuxuu noqday mid jir ahaan hooyadii dhashay. Xiisadda ayaa billaabatay inay sare u kacdo ku dhawaad ​​saacad markii ay duulimaadka socotay, taasoo keentay in duuliyihii diyaaradda uu dhinac u rogo.
Diyaaradda ayaa sheegtay in looxyo dabacsan loo isticmaalay in lagu xakameeyo wiilka, laakiin fiidiyaha ayaa sidoo kale muujinayay marinka shaqaalaha diyaaradda oo ku dhejinaya kursigiisa.
Duulimaadkii ayaa si nabad ah ku degay, rakaabkiina waxaa la saaray duulimaadyo kale ama waxaa la siiyay qolal hoteel.
Cajalad Duub: Heerka Badbaadada Duulimaadka Cusub
Si kastaba ha ahaatee, cajalad duub ah ayaa u kacday sidii loogu talageli lahaa amniga duulimaadka diyaaradda halkaas oo ay aad muhiim ugu tahay in rakaabka lagu xakameeyo amniga naf kasta oo kale oo saaran. Wax kharash ah kuma kacdo, si fudud ayaa loogu kaydiyaa dusha sare iyada oo aan la qaadin meel muhiim ah, waana xoog badan yahay. Awood u leh inuu qof fadhiisto - iyo haddii loo baahdo, aamus - inta lagu jiro inta ka hadhay duulimaadka.
Qoraalka majaajilada ah, filimka Sister Act 2, mid ka mid ah ardayda ku tartamaysa kooxda heesaha, Frankie, ayaa tusaya Walaashii Mary Patrick khamiiskiisii ​​jaban oo siibay oo leh, “Waxani waa dillaaceen! Hadda maxaan u malaynayaa inaan sameeyo, huh? ” Walaashii Mary Patrick ayaa si deggan ugu jawaabtay: “Dhageyso, ha xanaaqin. Hooyaday waxay dhihi jirtay waxba ma suuroobayaan marba haddii aad sidato xoogaa iimaan ah iyo duub weyn oo cajalad koronto ah. ” Waxay markaa karbaashtay cajalad dhuuban oo lacag ah caadadeeda waxayna ka siibtay cajalad weyn markay tiri, "Hello!"
Dhacdooyinkii Cajalada Duubka ee Dhawaan
Aynu dib u milicsanno dhowr dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee hawada dhexe oo si nabadgelyo iyo ammaan ku dhammaaday dhammaantood duubka sixirka ah ee cajaladda dhuubka lacagta.
Bishii Luulyo 12-keedii, qof dumar ah oo ka duushay Dallas-Fort Worth kuna socotay Charlotte diyaaraddii American Airlines ayaa markii ugu horraysay laga duubay curcurka iyo cagaha ka dibna waxay ku fadhiisatay kursigeeda, markii aysan taasi ku filnayn inay hoos u dhigto waxay isku dayday inay albaab ka furto diyaaradda sababtoo ah ma aysan doonayn inay mar dambe kor u kacdo. Shaqaalaha diyaaradda mid ka mid ah oo isna qaniinay wax ka qabtay si ay u ilaaliso badqabka rakaabka 190 ahaa ee saarnaa.
3-dii Ogosto, waxaa la sheegay in Maxwell Berry, oo ah 22 jir reer Ohio ah, la sheegay garaacday naasaha 2 ka mid ah shaqaalaha duulimaadka intii lagu jiray duulimaadkii Frontier Airlines oo saddex meelood meel feedhay. Shaqaalaha diyaaradda ayaa ku duubay isaga kursigiisa inta ka dhiman safarka Philadelphia ilaa Miami. Berry waxaa xiray boliiska markii uu ku degay 3 tiir oo batari ah. Saraakiil ka tirsan FBI -da oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inaysan raadin doonin dambiyada culus ee dowladda dhexe.
Sida laga soo xigtay Frontier, the shaqaalaha diyaaraddu waxay la kulmi doonaan cawaaqibkooda, inkastoo aysan caddayn waxa. Dhammaan diyaaraduhu waxay ahayd inay yiraahdaan waqtigaas: “Shaqaalaha duulimaadka ayaa, sida looga baahan yahay duruufahaas oo kale, laga nasan doonaa duullimaadka, inta laga soo gabagabeynayo baaritaanka.”
Tilmaan u ah Asalka Qarsoodiga Duubka
Ururka Ka-qaybgalayaasha Duullimaadka-CWA, oo matalaya ka-hawlgalayaasha duulimaadka ee Frontier, ayaa si kal iyo laab ah u taageeray falalka shaqaalaha. Guddoomiyaha ururka shaqaalaha, Sara Nelson, ayaa sheegtay in shaqaaluhu "lagu qasbay inay ku xakameeyaan rakaabka qalabkii ay diyaaraddu u heli lahayd."
Sida laga soo xigtay ururka shaqaalaha, diyaaradda ayaa siisa cajalad shaqaalaha haddii ay u baahdaan inay xakameeyaan rakaabka. Frontier kama uusan jawaabin su'aalaha ku saabsan arrintaas.
Sida laga soo xigtay borofisar ku takhasusay maareynta duulista oo ka tirsan Jaamacadda Metropolitan State University ee Denver, Jeff Price, waa “wax caadi ah in la isticmaalo cajalad dhuuban si loo sugo qof matalaya halista duulimaadka ama kuwa kale.” Wuxuu sharraxay in duullimaadyada qaarkood ay saaran yihiin xannibaadyo kale, sida dabacsanaan dabacsan, wuxuuna sheegay inuu qaado labadaba marka uu duulayo “munaasabaddan oo kale.”
Marka waxay umuuqataa wax caqli gal ah in loo qaato in qaar ka mid ah shirkadaha duullimaadyada ay si aamusnaan leh "u rakibeen" duubabka duubista ee arsenal adeegooda duulimaadka si ay xasilloonida iyo nabadgelyada gacanta ugu hayaan inta ay 36,000 mayl kor u kacayaan. Waxaan ka shakisan yahay inaysan jirin dad badan, haddii ay jiraan, rakaab taas diidi lahaa.